Dawlada Eriteria oo Shaaca Ka Qaaday Inay Taageersantahay Dawlada Soomaaliya - Xogtashacabka.com
Search...	Home About us Contact us Dawlada Eriteria oo Shaaca Ka Qaaday Inay Taageersantahay Dawlada Soomaaliya
Published on Saturday, 03 August 2013 02:02	Xogta Shacabka (New York) Xukuumadda Eretria ayaa sheegtay in ay si buuxda u Taageerayso Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayna qirsantahay Jiritaanka dowlada Somaaliya Ee uu hogaamiyo prof. Xasan Sheekh Maxmuud .
Sida laga soo xigtay Safiirka Xukuumadda Eretria u fadhiya Golaha Ammaanka Ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya ay tahay dowlad Matasha Shacabka Somaaliyeed ayna Xukuumada Eretria qirsantahy Jiritaanka dowlada Federaalka ee Soomaaliya ayna tahay dowlad Sharci ah waa sida uu hadalka U dhigay.
Araya Desta, oo ah Safiirka Eretria u fadhiya Golaha Amaanka ayaa sheegay In Eretria ay si rasmi ah uga hor cadaysay dhammaan Xubnaha Golaha Ammaanka kulankii ay diirada ku saarayeen Arimaha Soomaaliya iyo Eretria In dowlada Eretria ay si wayn u Ictiraafsantahay dowlada Soomaaliya ayna Eretria Taageerayso Dadaalada dowlada Soomaaliya ay ugu jirto Nabad iyo Xasilooni ka dhalata dalka Soomaaliya.
Safiirka Eretria u fadhiya Golaha Ammaanka ayaa Carabka ku adkeeyay in Eretria ay si wayn uga soo horjeedo Faragalinta lagu haayo Arrimaha Soomaaliya ee ay wadaan dowladaha dariska la ah Soomaaliya.
Desta, ayaa ugu dambayn ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed in ay Khilaafaadkooda ku dhameystaan Miiska Wadahadalka si loo helo Nabada Iyo Xasilooni ka islaaxda dalka Soomaaliya.